वीर अस्पतालमा 'मृत्यु कुर्दै' तीन बेवारिसे बिरामी
काठमाडौं– तपाईं हामी आफ्नै वा आफन्तको उपचारको सिलसिलामा वीर अस्पताल त पुगेकै हुन्छौं । स्वास्थ्य जाँच गरायो, फर्क्यो । त्यो भन्दा बढी मतलब हामी गर्दैनौं ।
तर गहिरो चासो दिएर हेर्ने हो भने वीर अस्पताल परिसरमा हाम्रो देशको गरीबी चित्रण गर्ने दर्जनौं दृश्य देख्न सकिन्छ ।
नपत्याए देशकै पुरानो वीर अस्पतालको आकस्मिक उपचार कक्षको शौचालयपट्टि एक पटक ध्यान दिएर हेर्नुहोस् । तपाइँले देख्न सक्नु हुनेछ– बेवारिसे अवस्थामा ऐया-ऐया गरेर छटपटाइरहेका बिरामीहरू ।
मेलम्ची घर भएका अन्दाजी ५० वर्षका मिलन नेपाली विगत १० दिनदेखि यही अस्पतालमा छन् ।
वीरमा वैशाख १३ गते भर्ना भएका नेपालीलाई एचआइभी एडस्, टीभी, ज्वरो, दिसाबाट रगत आउने समस्या छ । उनलाई अहिले जोन, ओनकाम, एन्टीवायोठिक, अन्डाम, एनएस र बेग्लोफन औषधिहरू खुवाइरहेको मेडिकल विभागका ड्युटी डाक्टर ओमीर देवानले लोकान्तरलाई बताए ।
बेवारिसे अवस्थामा रहेका मिलन नेपालीलाई प्रहरीले अस्पतालसम्म पुर्‍याइएको रहेछ ।
उनलाई वीर अस्पतालको शौचालयको छेवैमा एउटा स्टेचरमा राखिएको थियो । तर उनले बिरामी बस्ने बेडमा स्थान पाएनन् । एउटा स्टेचरमा बिना बिछ्यौनामा उनलाई राखिएको छ ।
त्यस्तै बेवारिसे अर्का बिरामी हुन्– अन्दाजी ५० वर्ष कै राम खत्री । एउटा खुट्टा सुन्निएको र अर्को खुट्टा सुकेको छ । उनी पनि रोगले च्यापेर छटपटाइरहेका छन् । अस्पतालमा उनको कुनै रेकर्ड राखिएको छैन ।
अस्पतालमा रहेका डाक्टहरूलाई सोधपुछ गर्दा ‘फाइल यतै थियो सर, कता गएछ ?’ भन्ने गैर जिम्मेवार जवाफ आयो । उनलाई बेवारिसे बिरामीको व्यवस्थापन गर्दै आएका दुर्गाप्रसाद अर्यालले नै औषधि दिइरहेका छन् ।
अर्यालले हातमा सेफ्ट्रीयाक्सोन र फाइलोपेन ५०० एमजी नामको औषधि देखाउँदै भने– ‘उहाँलाई मैले नै औषधि खुवाइरहेको छु । चिकित्सलाई मतलब छैन ।’
खत्री बोल्न सक्दैनन् । चिकित्सकले उनलाई सामान्य जाँच समेत गरेका छैनन् । उनलाई के भएको हो भन्ने पत्ता लाग्न सकेको छैन ।
‘पत्ता लगाउने कसले,’ अर्याललाई सोधियो, ‘मैले त बेवारिसे व्यवस्थापनको पदीय जिम्मेवारी निभएको हुँ । के भएको हो भनेर त चिकित्सकले पत्ता लगाउन सक्छन् ।’
खत्रीलाई पनि प्रहरीले नै वीर अस्पतालसम्म ल्याएर छोडेका हुन् । उनी कहिलेदेखि थलिएका हुन् भन्ने कसैलाई थाहा छैन । उनको अवस्था कमजोर छ । खानलाई पैसा छैन । ओढ्नलाई कपडा छैन ।
बेवारिसे बिरामीको पीडामा छट्पटाइरहेकी अर्की बिरामी हुन् – सिन्धुपाल्चोककी ३० वर्षीया अस्मिता तामाङ । उनलाई डाउनलो बेड १ मा राखिएको छ ।
तामाङको रोगको पहिचान भइनसकेकाले उनलाई एन्टीबायोटिक मात्र चलाइएको डा. देवानले लोकान्तरसँग बताए ।
तामाङको नाक र मुखबाट रगत आएर सुकेको स्पष्टै देखिन्छ । उनलाई बौद्ध प्रहरीले सडकबाट वीर अस्पतालमा ल्याएको रहेछ ।
अस्पतालले बेवारिसे बिरामीको व्यवस्थापनको लागि एक जना कर्मचारी खाटाएको छ । ती कर्मचारीले अस्पतालले निःशुल्क उपलव्ध गराएको औषधि र खान दिइरहेको डा. केदार प्रसाद सेन्चुरीले लोकान्तरसँग दाबी गरे । उनीहरूलाई अस्पतालमा नभएका औषधिहरू सन्जीवनी फार्मेसी र कृष्ण फार्मेसीबाट उपलब्ध गराउँदै आएको सेन्चुरीले बताए ।
दिनमा सालाखाला पाँचजना बेवारिसे बिरामी अस्पतालमा आउने गरेको अर्यालले बताए ।
बेवारिसे बिरामीका लागि दुई वटा बेड राखिएको छ । तर एउटा मात्र सञ्चालनमा छ ।
राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको निती तथा कार्यक्रमको ७३ नम्बर बुँदामा ‘अशक्त, असहाय र बेवारिसे मनोसमाजिक बिरामीहरूको उपचार र पुन:स्थापना गरिनेछ’ उल्लेख छ । स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा आकस्मिक शल्यक्रिया र ट्रमा उपचार सेवा उपलब्ध गराइनेछ’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस्तै गत वैशाख १५ गते राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालीहरू भोकभोकै मर्न नपर्ने र बिरामीले पनि मर्न नपर्ने बताउनुभएको थियो । तर वीर अस्पतालका यी बेवारिसे बिरामीको अवस्थाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिलाई गिज्याइरहेको देखिन्छ ।